दर्ता, एसएमएस प्रमाणिकरण कोड र एक धेरै अधिक - प्रुफिङ
दर्ता, एसएमएस प्रमाणिकरण कोड र एक धेरै अधिक — प्रुफिङ
निरन्तर भएको छ बिमार एक मा प्रयोगकर्ता छन्, जसले र खेल मा मजाक अन्य मान्छे । त्यसैले समस्या त्यहाँ भएको रिपोर्ट द्वारा अन्य वैध प्रयोगकर्ता र एक हानि को यातायात लागि ती मानिसहरू । छन् रूपमा मान्छे को एक नम्बर जो दुरुपयोग साइट गर्छन र प्रयोगकर्ता बनाउन असजिलो, दर्ता एक प्रयोगकर्ता रूपमा भएको छ. सेवा उपलब्ध छ जो मानिसहरू लागि मात्र हो वर्ष वा वृद्ध. साइट छ लाने सख्त उपाय । यसैले प्रयोगकर्ता गर्ने पट्टी वा नाङ्गो प्राप्त अगाडि क्यामेरा, मा संलग्न र यौन व्यवहार सकिन्छ प्रतिबन्ध प्रभावकारी छ । यो साइट एक एसएमएस कोड जेनेरेसन र प्रमाणिकरण योजना, ठाँउ मा आजकल. प्रयोगकर्ता लागि स्वीकार गर्न र प्रयोग गर्न अनुमति रूपमा सेवा, व्यक्ति पठाइने एक एसएमएस कोड हुनेछ जो अनियमित उत्पन्न । प्रयोगकर्ता टाइप गर्न कोड मा भएको छ कि पठाइयो मोबाइल र त्यसपछि सेवा प्रयोग. यो मिल्यो छ एक प्रयोगकर्ता को धेरै रिसले तिनीहरूले छन् रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक मोबाइल नम्बर प्राप्त गर्न मा च्याट.
समस्या संग यो विधि को छ भनेर धेरै छैनन् जो प्रयोगकर्ता छन्, तर एक मोबाइल च्याट गर्न चाहनुहुन्छ. यसैले प्रयोगकर्ता छैन जो एक मोबाइल फोन प्रयोग गर्न सक्षम छैनन् च्याट सेवा. दोस्रो समस्या हो कि मान्छे सामना छ भनेर एसएमएस कोड प्रणाली कहिलेकाहीं काम गर्दैन रूपमा आशा र प्रयोगकर्ता रही बारम्बार बन्द बाहिर.
हाम्रो साइट प्रदान गर्दछ सहज च्याट सेवा
हाम्रो प्रयोगकर्ता संग कुनै पनि अवस्थामा यद्यपि. हामी ठाँउ हो गर्न प्रतिबन्ध ती प्रयोगकर्ताहरूको हो जसले भाग. हामी अनियमित जोडी संग मान्छे संग जसलाई मुख्य आशय र नाडी को च्याट आवेदन छ मार्न पट्टाइ र सिर्जना गर्न एक ठाउँमा मान्छे को लागि बाहिर झुन्डियो. हामी महसुस भनेर पन्छाउन पनि धेरै स्थानमा सुरक्षा उपाय लगाउँछ बेचैनी प्रयोगकर्ता बीचमा छ र तिनीहरूले हुनेछ संकोच सेवा प्रयोग गर्न. नियामक उपाय गर्नुपर्छ ठाँउ मा राखे र दुवै पक्ष हुनुपर्छ उपयोगी मा यो लागू. यदि साइट एक्लै जिम्मेवारी लिन्छ र प्रयोगकर्ता जारी गर्न दुरुपयोग र यो बुरा हुन जा रहेको छ. यसैले प्रयोगकर्ता पनि गर्नुपर्छ अनुरूप नियम जोगिन र साइट प्रयोग लागि सेक्स र अन्य नग्न व्यवहार । कुनै दर्ता र एसएमएस कोड, तपाईं संग जोडी सकिन्छ मानिसहरू सजिलै र बिना कुनै पनि समय. यो राम्रो कुरा हो भनेर हामी के को लागि हाम्रो प्रयोगकर्ता रमाइलो गर्न एक बराबर सेवा को च्याट
← र दक्षिण कोरिया महिला डेटिङ, दक्षिण कोरिया एकल महिला अनलाइन
र कोरियाली बालिका डेटिङ - भिडियो खोज इन्जिन मा खोज →